Mouse Ce Certification, Battery Certification, Baadhitaanka Battery - Anbotek
Adeegyada Maxalliga ah: Marka la barbardhigo hay'adaha waaweyn sida TUV, SGS iyo Intertek, qiimaheena waa seddex meelood oo meel oo iyaga ah, marka lagu daro waqtiga hoggaanka oo gaagaaban. Adeeg tijaabo oo bilaash ah ayaa sidoo kale la heli karaa. Waxaad u baahan tahay inaad soo dirto shay-baarka hal mar oo keliya, dhammaan imtixaannada iyo shahaadooyinka waxaa lagu dhammaystiri karaa shaybaarkayaga Shenzhen, Shiinaha.
Hubinta Tayada: Haddii Anbotek uu fursad u helo in lagu qoro shaybaarkaaga Shiinaha, natiijooyinka baaritaanka ee shaybaarkaaga ee alaab-qeybiyahaaga Shiinaha, ha noqoto baasaboor ama ha dhaco, waxaan si run ah kuugu soo wargelin doonnaa markii ugu horreysay si looga hortago warbixinnada beenta ah iyo kuwa aan ahayn alaabooyinka waafaqsan.
Qiimaha Adeegyada Lagu Darey Adiga oo ah lamaanahaaga istaraatiijiga ah, waxaan ku bixin karnaa adeegyadan bilaashka ah ee soo socda a) adeegyo la-talin oo hal-ilaa-hal ah oo bilaash ah si loo xalliyo dhammaan dhibaatooyinka imtixaannada iyo shahaadeynta ee ka soo gaadhay suuqyada caalamiga ah ee wax soo saarkaaga. b) adeegga baaritaanka saxda ah ee warbixinnada iyo shahaadooyinka. c) talo soo-saareyaasha tayo sare leh. Waxaan haynaa xog ururin (50,000) alaab-qeybiyeyaal tayo sare leh (soo-saareyaal) ah oo ku sugan Shiinaha,
Faa'iidada Shahaadada CE Waan tijaabin karnaa oo diyaarin karnaa, habeyn karnaa warbixinnada tijaabada ah ee qumman, aan fiicnayn iyo kuwa aan la weydiin karin iyadoo la raacayo LVD Yurub, EMC, ROHS, RED, MD Tilmaamaha iyo Xeerarka. Tayada iyo waqtiga hogaaminta ee imtixaanka iyo cadeynta ayaa kaa yaabi doonta adiga iyo in ka badan qiimaha aan bixinno.
Anbotek wuxuu leeyahay shaybaarka EMC ee hogaaminaya aduunka, oo ay kujiraan: labo hab 3-mitir ah qolalka antrum-ka buuxa (inta jeer ee tijaabada ilaa 40GHz), afar qol oo gaashaaman, hal qolka baaritaanka electrostatic (ESD), iyo hal shaybaar kahortaga faragelinta. oo ay soosaartay oo ay dhisteen Jarmalka ROHDE & SEHWARZ, SCHWARZBeck, Switzerland EMC Partner, America AGILENT, TESEQ iyo shirkado kale oo caalami ah oo ugu sareysa warshadaha. BADAN
Sheybaarka inta jeer ee raadiyaha
RF Lab wuxuu ka kooban yahay daraasiin khubaro tiknoolajiyad isgaarsiineed oo wireless ah iyo injineero, oo ka hadlaya Shiinaha SRRC, EU RED, Aqoonsiga Mareykanka FCC, Canada IC, Japan TELEC, Korea KC, Malaysia SIRIM, Australia RCM shahaado wax soo saar wireless ah in ka badan 40 dal. iyo gobolada. BADAN
Shaybaarka badbaadada korantada
Shaybaarka Badbaadada ayaa ka mid ah shaybaarada ugu horreeya ee laga aasaasay Imtixaanka Anbotek, oo u adeegaya baaritaanka amniga iyo shahaada alaabooyinka kala duwan ee ganacsiga iyo alaabada elektaroonigga ah iyo korontada. Iyada oo leh qalab tijaabo oo horumarsan, waayo-aragnimo hodan ku ah mashaariicda amniga iyo in ka badan 20 injineerro farsamo-yaqaanno xirfadlayaal ah, Hay'adda Imtixaanka Anbotek waxay si buuxda u buuxin kartaa shuruudaha macaamiisha looga baahan yahay baaritaanka iyo caddeynta. BADAN
Sheybaar batteriga tamarta cusub
Si loola shaqeeyo kor u qaadista iyo beddelka warshadaha bateriga, Anbotek Testing wuxuu si weyn u xoojiyay maalgashiga batteriga keydinta tamarta iyo sheybaarka batteriga korontada sanadihii la soo dhaafay, wuxuu hagaajiyay qalabka iyo qalabka baaritaanka batteriga kala duwan, wuxuuna soo bandhigay injineero sare iyo injineero batteri ah. BADAN
Shaybaarka Cuntada lala Xiriira iyo Alaabada Macaamiisha
Waxaan haynaa sannado badan oo cilmi baaris farsamo iyo khibrad tijaabin ah oo ku saabsan agabyada xiriirka cuntada. Meelaha ay aqoonsan yihiin CNAS iyo CMA waxay daboolayaan shuruudaha xakamaynta nabadgelyada ee hadda jira ee waxyaabaha lala xiriirayo cuntada ee baaxadda adduunka. Sheybaarka badeecooyinka macaamiisha ayaa ah xirfadle ku hawlan qalabka elektarooniga ah, gawaarida, qalabka carruurtu ku ciyaaraan, dharka iyo waxyaabaha kale ee la soo baarayo ee macaamiisha, qiimeynta waxqabadka iyo hagaajinta adeegga. hay'adaha. BADAN
Sheybaarka lagu kalsoonaan karo
Sheybaarka kalsoonida ee sheybaarka Anbotek waa hay'ad adeeg farsamo ku takhasustay baaritaanka alaabada elektarooniga ah iyo korontada Diirada saarida wax soo saarka wax soosaarka iyo cilmi baarista lagu kalsoonaan karo iyo ka caawinta macaamiisha inay horumariyaan tayada wax soo saarka BADAN
Qalabka Shaybaarka Qalabka & Qalabka Qaybaha Cusub
Qalabka sheybaarka iyo qeybaha sheybaarka waa sheybaar dhinac saddexaad ah oo ku takhasusay baaritaanka alaabada gawaarida Waqtigaan la joogo, shirkaddu waxay heshay shahaadada CNAS, CMA iyo CCC ee qalabka gudaha gudaha. Waxaan ku siin karnaa adeeg xirfad iyo tayo sare leh oo hal-joogsi ah. berrinka tijaabada hantida jirka ah ee qalabka qurxinta gudaha / dibedda, baaritaanka VOC ee qalabka iyo qaybaha, baaritaanka qalabka gawaarida, iwm. BADAN
Waxtarka tamarta laydhka garaadka & shaybaarka waxqabadka iftiinka
Waxaan in ka badan 10 sano oo khibrad ah u leenahay adeegga shahaadeynta caalamiga ah ee dhanka shahaadada waxtarka tamarta nalalka. Waxaan la sameynay xiriir iskaashi oo wanaagsan macaamiisha dhowr ah waxaana ururinnay tobanaan kun oo kiisas shahaado guuleysi ah. Isla mar ahaantaana, waxay xiriir dhow la leedahay UL, BV, ETL, EPA, DLC, TUV SUD, TUV Rheinland iyo hay'ado kale oo ku yaal Jarmalka, waxayna ku raaxeysataa faa'iidooyin muuqda oo ku saabsan waddooyinka iskaashiga. BADAN
Adeegga wareejinta caalamiga ah
Wareejinta caalamiga ah iyo shahaadada One Belt Iyo One Road Anbotek waxay ku hawlanayd shahaadada caalamiga ah in ka badan 10 sano, waxayna soo aruurisay khibrad hodan ah oo ku saabsan CCC, SABER (hore SASO), SONCAP, TUV MARK, CB, GS, UL, ETL, SAA iyo meelaha kale ee shahaado bixinta. BADAN
Maaddaama ay tahay hormuud bixiye ka ah qaybta 'photovoltaic module' iyo qaybaha baaritaanka iyo adeegyada shahaadooyinka ee Shiinaha, Anbotek Testing Co., Ltd. waxay leedahay qalab tijaabo oo heer caalami ah waxaana oggolaaday oo aqoonsaday CNAS, CBTL, TUV, iwm, iyagoo siinaya adeegyo la xiriira amniga iyo tayada. warshadaha caalamiga ah ee sawir-qaadista. BADAN
Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited (oo loo soo gaabiyo Anbotek, Stock code 837435) waa qayb dhammaystiran, madax-bannaan, awood-baaris ah oo dhinac saddexaad ah oo tijaabisa shabagyada adeeg ee dalka oo dhan. Qeybaha wax soo saarka adeegga waxaa ka mid ah Internetka Waxyaabaha, 5G / 4G / 3G alaabada isgaarsiinta, gawaarida casriga ah iyo qeybahooda, tamarta cusub, agabyada cusub, aerospace, gaadiidka tareenka, difaaca qaranka iyo warshadaha milatariga, sirdoonka macmalka ah, deegaanka deegaanka iyo wixii la mid ah.
Adeegyo tijaabooyin xirfad iyo adag leh BADAN
Xogta xaqiijinta eex la'aanta BADAN
Xalka xirfadeed si loo xalliyo dhibaatooyinka wareegga shahaadada sheyga, si adduunka loola wadaago alaab tayo leh BADAN
Adeegyada Soo Kordhinta
Adeegyada kor-u-qaadista si loo helo tababar caalami ah, maamul, kormeerid adeegyo kor u kaca ah oo aad ku qanacsan tahay, si aad u ilaaliso qiimahayga. BADAN